မြန်မာဝမ်း ပြီးတော့ မြန်မာတူး ထွက်လာပါပြီ။ NLP National Language Programmes မှ ပြုလုပ်ပြီး Version က 4.1 ဖြစ်ပါတယ်။ www.mcf.org.mm တွင် စတင်လွှင့်တင်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုလိုသူများ သွားရောက် ယူငင်အသုံးပြုနိုင်ကြပါပြီ။ အရင် version ဖြစ်တဲ့ မြန်မာဝမ်း က ယူနီကုဒ်စံချိန်စံညွှန်းများကို အပြည့်အ၀လိုက်နာ ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ [ စံချိန်စံညွှန်းများကို အပြည့်အ၀လိုက်နာတာတဲ့ ... ဘာတွေလဲ မသိဘူး ... ပြီးမှ ရှာပြီးဖတ်ကြည့်ရဦးမယ်]
၀န်ကြီးဌာနများ အားလုံးတွင် မြန်မာဝမ်းကို အသုံးပြုလာခဲ့ကြရာ သုံးစွဲရာတွင် အခက်အခဲအချို့ ရှိနေသော်လည်း ယူနီကုဒ်စနစ်ကို အပြည့်အ၀လိုက်နာသော စနစ်တစ်ခုအဖြစ် အားထားအသုံးပြုနေရကြောင်း သိရှိရသည်။ [ဇော်ဂျီကို မေ့နေကြတာလား ... ဟင်]
မြန်မာအိုင်တီပညာရှင်များမှ ယူနီကုဒ်စံညွှန်းများကို တစ်စိတ်တပိုင်းလိုက်နာသော font စနစ်များကိုလည်း မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် မိမိထုတ်လုပ်လာကြရာ ယူနီကုဒ်စံညွှန်းပြည့်မီမှု ရှိမရှိနှင့်ပက်သက်ပြီး ပညာရှင်အချင်းချင်း အငြင်းအခုံ ဖြစ်ပွားမှုများရှိခဲ့ကြောင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ဖော်ပြချက်များအရ တွေ့ရှိရသည်။
[ဘာတွေလဲ ... တစ်စိတ်တပိုင်းတွေရော အပြည့်အ၀တွေရော ရှုပ်နေတာပဲ ... ဒါမျိုးကိစ္စတွေ လောကကြီးမှာ တကယ်ရှိတယ်ပေါ့ ... (တရုတ်ကားတွေထဲကအတိုင်း ပြောကြည့်တာ) ... တကယ်တော့ font လောက ကလည်း သိုင်းလောကထက်တောင် ရှုပ်လာသလိုပဲ ... ဟီးဟီး]
လက်ရှိယူနီကုဒ်စံ၏ စည်းကမ်းများအရ မြန်မာစာစာလုံးအချို့ကို ရိုက်နှိပ်သိမ်းဆည်းရန် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ [အဲဒါတော့ လက်မခံဘူး ... Notepad မှာ ယူနီကုဒ်နဲ့စာရိုက် ... ပြီးရင် သိမ်းတဲ့အခါကျတော့ Encoding မှာ UTF-8 ကို ရွေးပြီးသိမ်းရင် ရမှရ .. ဘယ်နှစ်ဖိုင် သိမ်းချင်လဲ ... ပြော]
လက်ရှိအနေအထားအရ မြန်မာဝမ်းသည်သာ ယူနီကုဒ်စည်းကမ်းနှင့် အကိုက်ညီဆုံး ပြုလုပ် ထားသောစနစ်ဖြစ်ကာ ပြီးပြည့်စုံသော Unicode-complaint စနစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်ရန်ကိုမူ စောင့်ဆိုင်းရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း အိုင်တီပညာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းများမှ သိရှိရပါသည်။ [မြန်မာ ဘလော့တွေလာကြည့်စမ်းပါ ... ဇော်ဂျီမှ .. ဇော်ဂျီ .. ကျန်တဲ့ဖေါင့်တွေ ရှိတယ်လို့တောင် မထင်ဘူး]
Labels: Graphic/Web Design
Myanmar Blues 5:22 pm
It would be Great if Zaw Gyi also update their font and the Zawgyi keyboard pack. Still needs alot of improvement but haven't heard that they are developingabetter version.
CMS 5:57 pm
Whatever people talked about Myanmar fonts .. A set of Win Fonts is still using for commercials.
Win Yangon ..
so .. what should we do? ..
I can't wait for next new Myanmar Typing Tutor Version6if they are still arguing for Uni Font Systems .. better should do Multiple Systems! so .. they can type (use) what they want? (or) MountMandalay needs to make its own Myanamr UniCode?
David Ba Con English Myanmar Typing Tutor
MountMandalay Solution Services
MgHla 2:52 am
ဇော်ဂျီက ယူနီကုတ်တော့ ယူနီကုတ်ပဲ... တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့် ယူနီကုတ်တော့ မဟုတ်သေးဘူးဟ... ထွက်သမျှ ယူနီကုတ်တွေထဲမှာ တော့ အဆင်အပြေဆုံး ယူနီကုတ်ပဲ...
မြန်မာဝမ်းကတော့ ယူနီကုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ အတူနိုင်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ် ပြောတာပဲ... ဒါပေမယ့် ရိုက်ရတာ စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်...
CMS 11:15 am
Ko MHT, I believe that you can make it. :)
ကိုတုံရေ ... မြန်မာဝမ်း ကောင်းမကောင်း မြန်မာဝီကီကိုပဲ ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်ဗျာ .. ဟုတ်ဘူးလား :)
Myo Kyaw Htun 2:06 pm
တစ်စိတ် နဲ့ တစ်ပိုင်း အမြည်းကတော့ ရှပ်ဘဲတွေ အရက်ဆိုင်မှာ သုံးတဲ့စကား၊ အင်တာနက်ပေါ် ရောက်လာတာလား။ နောက်တာပါဗျာ။ အစ်ကို တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း ဆွဲဦးမလား။
CMS 2:50 am
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမကြိုက်ဘူး တစ်ဂျားပဲ ကြိုက်တယ် ဟားဟား